Magacyadda xirfadaha | Suomen Mielenterveysseura
Dadka ka shaqeeya arrimaha caafimaadka dhimirka waxbarashadooda iyo shaqooyinkoodu way kala duwanyihiin. Magacyadda xirfadooda shaqo iyo shaqada ay qabtaan waa mid kala duwan, taas oo mar-mar qaar dadka adeega helaya ay fahmi waayaan ama ay ku wareeraan. Halkan hoose waxaa si guud loogu xusayaa magacyadda iyo shaqooyinka shaqeeya hawlaha caafimaadka dhimirka.
Qof soo bartay cilmiga maskaxda, dhimirka (Psykiatri)
Cilmiga maskaxda ama dhimirka, waa cilmi hoostaga cilmiyada taqasuska caafimaadka, wuxuuna si gooni ah u cabiraa dhimirka. Qofka soo bartay cilmigan waa qof leh taqasus takhtarnimo soona qaatay waxbarashada dhimirka. Cilmigan waxaa kale oo lagu taqasusi karaa cudurada dhimirka, kuwa dhimirka ee ilmaha, kuwa dhimirka ee dhalinyarada ja sharciga dhimirka.
Takhtarka dhimirka wuxuu baadhayaa isla markaasna qeexid uu ku sameynayaa nooca dayeelka loo baahanyahay sida daryeel daaweyn ah ama mid latalin ah, mid wada hadal ah iyo wixii kale ee la mid ah, iyadoo ay arrinta lagala hadlayo qofka dayeelka loo sameynayo. Marka la eego dadka soo barta cilmiga dhimirka (psykiatri) oo kaliya ayaa dawo ka qori kara.
Saykolojistuhu waxay soo qaateen waxbarasho heer jaamacadeed cilmiga saykolojiga. Isticmaalka magaca saykolojiste waxay u baahan tahay xuquuq sharciyeyn. Saykoloji cilmi ahaan wuxuu la xiriiraa baadhista sida qofku u fikiro, hab dhaqanka dadka iyo sida uu u shaqeynayo sidoo kale xiriirka qofku la leeyahay naftiisa iyo dadka kale.
Saykolojistuhu wuxuu ka shaqeeyaa hawlo kala duwan oo hay’adaha caafimaadka hoostaga sidoo kale meelo kale oo bulshadda waaxyaheeda ka mid ah. Saykolojistuhu wuxuu ka shaqeeyaa tusaale isbitaalada guud ee dhimirka, xarumaha dhimirka, xarumaha koriinka iyo caafimaadka qoyska, iskoolada saykolojiste ahaan, sidoo kale xafiiska shaqada si talasiiye ah marka qofku uu dooranayo xirfad uu baranayo. Saykolojistaha shaqada uu qabto aad ayey u kala duwan tahay meelo kala duwana wuu ka shaqeeyaa, dhinaca daryeelka dhimirka saykolojistuhu wuxuu qiimeeyaa, baadhaa xaaladda qofka wuxuuna siiyaa latalin.
Hadal ku daaweeyaha dhimirka (Psykoterapeutti)
Kal-kaaliyada caafimaadka dhimirka waxbarashadiisu waa tusaale saykoloji, takhtar dhimir ama shaqaale arimo bulsho. Intaas kadib ayuu sameeyaa waxbarasho taraabiyada caafimaadka dhimirka. Kal-kaaliyaha caafimaadka dhimirka wuxuu qofka siinayaa talooyin niyada iyo dareenka qofka kor u soo qaada, sidoo kale talooyin u fududeeya inuu xaliyo dhibaatooyinkiisa. Kal-kaaliyaha caafimaaska dhimirka wuxuu la shaqeyn karaa qofka, qoyska ama kooxda. Sii akhri teraabiyada cilminafsiga.
Takhtarka dhimirka, saykoloji iyo kal-kaaliyaha caafimaadka dhimirka waa xirfado la ilaaliyo. Xirfadahan dadka ku shaqeeya Valvira (loona aqoonjirey TEO) ayaa heerkooda waxbarasho kadib siisa fasax in ay ku shaqeysan karaan magacaas. Sidaas darteed ma jiro qof isu magacaabi kara inuu yahay takhtar ama kal-kaaliye caafimaadka dhimirka si sharci ah.
Kal-kaaliyaha daryeelka dhimirka (Psykiatrinen sairaanhoitaja)
Kal-kaaliyeyaasha daryeelka dhimirka waxay ahaan karaan kuwo leh waxbarasho kal-kaaliye caafimaadka dhimirka ama shaqaale arimo bulsho, kuna taqasusay taraabiyada dhimirka. Kal-kaaliyeyaasha daryeelka dhimirka waxay badanaa bixiyaan latalin, akhbaar iyo caawimo ay siinayaan qofka cudurka dhimirka qaba ama qofka dhibaatooyin kala duwan ay la soo dersaan.
Kal-laaliyaha qofka niyadjabka qaba (Depressiohoitaja)
Kal-kaaliyaha qofka niyadjab waxbarashadiisu tusaale waa mid la mid ah tan kal-kaaliyaha caafimaadka dhimirka kaas oo xarunta caafimaadka ka bixiya latalin. Kal-kaaliyaha qofka niyadjabka qaba badanaa wadankan wuxuu ka shaqeeyaa xarumaha caafimaadka. Xarumaha caafimaadka kal-kaaliyaha qofka niyadjab, waxaa loo soo gudbiyaa dadka qaba niyadjab fudud ama midka culus sidoo kale mararka qaar waxaa loo soo gudbiyaa dadka qaba kurbada. Kulamada dadkaas loo abaabulo qofka waxaa la siinayaa caawimo iyo akhbaar la xiriirta xalinta dhibaatooyinka. Kal-kaaliyaha niyadjabka, qofku wuxuu booqanayaa 4-6 jeer.
Shaqaalaha ka caawinta dhibaatooyinka (Kriisityöntekijä)
Dadka shaqaalaha caawinta dhibaatooyinka wuxuu soo qaatay waxbarashada macadka ama jaamacada arrimaha bulshadda ama caafimaadka. Waxay noqon karaan saykoolojisti, kal-kaaliyaha caafimaadka dhimirka, kal-kaaliye caafimaad ama shaqaalaha arrimaha bulshadda. Sidoo kale waxay soo barteen arrimaha xalinta dhibaatooyinka, tusaale taraabiyada dhibaatada, shaqaalaha xalinta dhibaatooyinka tusaale waxay ka shaqeeyaan Suomen Mielenterveysseuran ama xarunta xalinta dhibaatooyinka ee degaanka. Shaqaalaha xalinta dhibaatooyinka waxay bixiyaan sidoo kale latalin la xiriirta dhibaatooyinka nolosha, waxayna caawin siiyaan dadka aafooyinka culus ay ku yimaadaan.
Kalkaaliyaha caafimaadka dhimirka (Mielenterveyshoitaja)
Kal-kaaliyaha caafimaadka dhimirku wuxuu soo qaatay waxbarasho aasaasi ah ee caafimaadka, waxayna ku taqasusaan dhimirka iyo waxyaabaha ku taxaluqa maan-dooriyaha. Kalkaaliyaha caafimaadka dhimirka waxay aad uga shaqeeyaan waaxyaha caafimaadka, tusaale isbitaalka qeynta caafimaadka dhimirka, gar-gaarka deg-degga ah iyo xarumaha caafimaadka.
Caawiye, kalkaaliye (Lähihoitaja)
Caawiyihu wuxuu soo qaatay waxbarasho aasaasi ah oo la xiriirta arrimaha bulshadda iyo caafimaadka, wuxuuna sii baran karaa tusaale caafimaadka dhimirka iyo maandooriyeyaasha. Caawiyuhu wuxuu ka shaqeeyaa meelo badan oo waaxyaha caafimaadka ah, tusaale isbitaalada iyo meelaha lagu daryeelo dadka waaweyn.
Shaqaalaha arrimaha bulshada (Sosiaalityöntekijä)
Shaqaalaha arrimaha bulshada wuxuu soo qaatay waxbarasho jaamacad waxayna ku taqasusaan arrimaha bulshada. Waxay ka shaqeeyaan meelo badan oo bulshadda qeybaheeda ah, sida qeybaha kala duwan ee arrimaha bulshadda, isbitaalada dhimirka ama iskoolada, sida maamule ku xigeen. Dhinaca hawlaha bulshada waxay bixiyaan hagid, latalin iyo caawimo la xiriirta nolosha qofka.
Shaqaalaha hagidda bulshada (Sosiaaliohjaaja)
Hagaha arrimaha bulshadu wuxuu soo qaatay waxbarashada aasaasi ah macadka arrimaha bulshadda iyo caafimaadka. Waxay ka shaqeeyaan xafiisyada macaamiisha arrimaha bulshadda iyo waaxyaha caafimaadka. Shaqooyinkooda waxaa ka mid ah tusaale caawimada macaamiisha, hagidooda iyo wixii kale ee baxnaanin ah.
Taraabiga xubnaha jirka (Toimintaterapeutti)
Taraabiga xubnaha jirka wuxuu soo qaatay waxbarashada macadka arrimaha bulshadda iyo caafimaadka. Waxay ka shaqeeyaan waaxyaha arrimaha bulshadda iyo caafimaadka sida qaabilaadda macaamiisha. Shaqadooda tusaale ahaan waxaa ka mid ah caawimada, hagida iyo baxnaaninta kale ee macaamiisha.